Hawlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo ka socda magaalada Kismaayo – Radio Muqdisho
Hawlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo ka socda magaalada Kismaayo
Ciidamada Nabadsugidda maamul Goboleedka Jubbaland, ayaa Maanta Howlagallo lagu xaqiijinayo Ammaanka ka sameeyay Xaafado ka mid ah Magaalada Kismaayo.
Xaafadda Guulwade iyo Laamaha ku xeeran, ayaa la sheegayaa in ay Ciidamadu kasoo qabqabteen Boqolaal Qof oo u badan Dhallinyaro looga shakiyay falal Ammaan darro.
Saraakiisha horkacaysa baaritaannadan, ayaa Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed u sheegtay inay Dadka ay gacanta ku hayaan kala saari doonaan, isla markaana ay fasixi doonaan ciddii wax dembi ah lagu waayo.
Maamulka Gobolka Jubbada hoose, ayaa sidoo kale sheegay inay hawlgalladani qayb ka yihiin, tallaabooyinka ay ku xaqiijinayaan nabad gelyada, maaddaama laysu diyaarinayo doorashooyinka dadban ee Dalka.
Safiirka Soomaaliya ee Wadanka Koorfurta Sudan oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo kulamo la qaatey qeybaha bulshada ee magaalada Baydhabo